Olee banyere nchekwa maka na onye toro eto na-agba electric skuuta? - Jomo Technology Co., Ltd
Olee banyere nchekwa maka na onye toro eto na-agba electric skuuta?
Ma electric scooters aghọwo a na-ewu ewu nhọrọ maka ntụrụndụ na mma. The na-eto eto na-agba ndị electric itule skuuta , pụrụ inwe nguzozi na mpiaji ike, na ike na-akwalite mmepe nke cerebellum na-akwalite ahụ ụbụrụ, welie cardiopulmonary mgbasa. Na usoro nke-agba electric itule osisi , n'ihi na ị chọrọ ịnọgide na-enwe nguzozi nke ọ bụla akụkụ muscle ahụ bụ na a na steeti nke ufiop ọrụ, n'ozuzu itule site ije, ịzụlite ha ntị ma na mmeghachi omume na-agba, dịkwuo mgbanwe nke ahu, melite nkịtị mma, welie ọgụgụ isi, otú ahụ onwe adịzi skuuta ije na-mara dị ka "ihe egwuregwu egwuregwu", ọ pụrụ ịzụlite na imeziwanye na-eto eto ike, nwee obi ike, nọọrọ onwe ha, ike, ike ike àgwà.
The mbụ echiche bụ nchekwa nke okenye, bụ nke na-isi ihe na-na-na nkwado nke ezinụlọ, na electric onwe adịzi skuuta ị zụta ma gafere Mankeumman 2272 asambodo ma ọ bụ, n'ihi na nke a na-ekpebi ya nchekwa.
1. The onwe adịzi hoverboard ije site na iji ike ịchịkwa ahụ itule ike, nke na-eme ka ụkwụ uru na-agbake na mma budata, n'otu oge, na ụkwụ bụ ihe ndị kasị ukwuu ihe nke akụkụ nke ahụ mmadụ, na ala efere nke ụkwụ na esemokwu-anọgide na-akpali ndị Self adịzi skuuta ride, nwere ike inwe acupoint mmalite, melite ngwa ọrụ.
2. Ke ịnya usoro, n'ihi na itule ịnọgide na-enwe, akụkụ dị iche iche nke ahụ uru tensi, nwere ike ime ka ubu, n'úkwù, ụkwụ, nkwojiaka, spain na ndị ọzọ na nkwonkwo e n'obi. Iji ihe n'ụzọ dị irè na-ewusi ụkwụ ọrụ, na iji nọgide na ya mgbanwe.
3. Ogologo okwu ịnya nwere ike kwalite nke itule nke ụbụrụ na akwara mpiaji ike, nwere ike budata mma na-ehi ụra, energetic, full of okorobịa vitality, mgbochi ịka nká, n'ụzọ dị irè gbochie omume nke ọrịa Alzheimer.
4. Electric itule skuuta sports mma mmetụta, ma nwekwara ike n'ụzọ dị irè-achịkwa gị ibu, gbochie ibu oké ibu.
5. Electric itule ụgbọ ala ije bụ bụghị naanị a bara uru egwuregwu, ma ọ bụ ihe mara mma na-elekọta mmadụ na-eme, nwere ike ime ka ndị enyi ọhụrụ, na-ebu dị iche iche nke omume, ime ka ọdịnaya nke ndụ, ewepụ ma belata àgwà ọjọọ.
© Copyright - 2015-2021: All Rights echekwabara. Ike site Koowheel.com